प्रविधी – Page2– गाउँपालिका
शुक्रबार, पौष १५, २०७३
मोबाइल फोन चलाउन निकै आवश्यक परेको बेला फोनको ब्याट्री चार्ज हुन घण्टौँ लाग्ने समस्या आउँदा कस्तो छटपटी हुन्छ ? हामी सबैले भोगेकै कुरा हो । तर यसको समाधानका लागि कुनै जादुमय तरिका छैन । यद्यपि केही काइदा छन् जसले ब्याट्रीलाई राम्रो ढंगबाट चार्ज गर्नका लागि लाग्ने समयलाई केही कम गर्न सहयोग गर्छन् । ती उपाय तपाइँले पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ । · फ्लाइट मोडमा राख्नुहोस्: यो एउटा निकै साधारण तरिका...
तपाईंले मोबाइल नेटवर्कमा टु जी, थ्री जी तथा फोर जी भन्ने गरेको सुन्नुभएकै छ । आखिर यसो भनेको के हो ? मोबाइल डाटाको क्षेत्रमा जी भनेको जेनेरेसन अर्थात् पुस्ता हो । अर्थात् वान जी भनेको मोबाइल डाटाको पहिलो पुस्ता हो । मोबाइल नेटवर्कको क्षेत्रमा वान जी को सुरुवात १९९१ मा भयो । यो नेटवर्कमा केवल फोन कल मात्र हुन्थ्यो र यो नेटवर्कका फोन पनि अनौठा खाले हुन्थे । तर जब मोबाइल नेटवर्कमा दोश्रो पुस्ताको प्र...
यो वर्ष उपभोक्ताले किन मन पराएनन् महंगा स्मार्टफोन ?
स्मार्टफोनको दुनियाँमा एप्पलको जादू सन् २०१६ मा केही घटेको देखिएको छ । सन् २००७ मा आइफोन लन्च भएपछि एप्पलले स्मार्टफोनको दुनियाँमा यस्तो जादु गरेको थियो कि, मानिसहरु एप्पलका प्रडक्टहरुका लागि रातभर लाइनमा उभिएर पर्खन्थे । तर स्मार्टफोनको दुनियाँका लागि सन् २०१६ यदी स्मरणीय बन्यो भने सामसुंगको ग्यालेक्सी नोट सेभेनको ब्याट्रीको समस्या कारण बन्यो, जसले विश्वभर एक नयाँ समस्या खडा गरिदियो । ग...
नौ सय १५ घण्टा ब्याट्री ब्याकअप भएको जिओनीको स्मार्टफोन
चिनिया स्मार्टफोन कम्पनी जिओनीले आफ्नो बहुप्रतिक्षित स्मार्टफोन M2017 चीनमा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त फोनको मूल्य झण्डै एक लाख १० हजार रुपैयाँ बराबर पर्छ । यो एक निकै शक्तिशाली फोन हो । यसमा ७ हजार मिलिएम्पिएर आवर क्षमताको ब्याट्री छ । त्यस्तै ६ जिबीको र्‍याम १ सय २८ तथा सय २५६ जिबीको इन्टर्नल स्टोरेज रहेको छ । कम्पनीको दाबीअनुसार यो फोनको ब्याट्री ब्याकअप ९ सय १५.४२ घण्टा रहेको छ । अर्थात् ...